XOG: SADDEX Arrimood Oo Liverpool Ku Garaaci Karto Manchester United Iyo Qaabka Kulankii PSG U Caawinayo Klopp - Cadalool.com
XOG: SADDEX Arrimood Oo Liverpool Ku Garaaci Karto Manchester United Iyo Qaabka Kulankii PSG U Caawinayo Klopp
February 22, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Bilowgii xili ciyaareedkan 2018-19, Manchester City ayaa ahayd kooxda koowaad ee loo saadaalinayo inay ku guuleysato horyaalka Premier League, waxaase soo labaysay Liverpool oo hoggaanka ku qabsaday. Horyaalka xili ciyaareedkani wuxuu ku bilaabmay jew igii ay cid walba filaysay oo ah in City ay figta sare fadhiyi doonto, waxaanay booskaas joogtay illaa laga soo gaadhayey bishii December oo Liverpool ay afar dhibcood ka sare martay, illaa ay kusoo koobmeen saddex.
Sidaas oo ay tahay, Liverpool waxay la kulantay dibin-daabyooyin, waxaanay lumisay fursado badan oo ay kaga baxsan lahayd Manchester City oo hadda farqiga goolasha ku haysa hoggaanka inkasta oo Reds ay haysato hal ciyaar oo ay saddex dhibcood kula soo noqon karto hoggaanka. Pep Guardiola ayaa usbuucan u diyaarinaya kooxdiisa finalka Carabao Cup oo ay Chelsea ku ballansan yihiin Axadda, laakiin Klopp ayaa maraya imtixaankii ugu adkaa, waxaanu ka hor tegayaa Manchester United oo jewi wanaagsan ku jirta, isla markaana joogta hoygeeda Old Trafford.
Laba bilood ka hor, labada kooxood waxay ku kulmeen Anfield, waxaana 3-1 ku adkaatay Liverpool. Intii ka dambaysay, United waxay gashay degganaansho, xasillooni, guulo iyo inay dib ugu soo laabato boosaska sare oo ay haddaba afraad ku jirto, sababtuna waa inuu isbeddelay hoggaankii sare oo shaqada laga caydhiyey Jose Mourinho, loona dhiibay Ole Gunnar Solskjaer.
Jurgen Klopp waxa uu ogsoon yahay in garoonka Old Trafford uu ku dhibaatoon karo, suurtogalna ay tahay inuu lumiyo hoggaanka horyaalka. Sidoo kale, waxa uu maskaxda ku hayaa in United ay haysato ciyaartooyo si fudud wax uga beddeli karaya ciyaarta, waana inuu joojiyo laacibiintaas si uu u heli karo dhibcaha kulanka.
Haddaba waxa horyaalla tababaraha Liverpool saddex farsamo ama taariko oo uu ku ciyaari karo, si uu u xaqiijiyo in ciyaartu ay dhinaciisa noqoto.
3. In khadka dhexe lagu go’doomiyo Matic iyo Herrera
Mid ka mid ah sababaha tababare Solskjaer uu ku najaxay intii uu United joogay waxa ka mid ah, waxqabadka khadka dhexe ee Matic iyo Herrera. Laacibka reer Serbia waxa uu istaagaa difaaca hortooda oo uu ka ilaaliyaa khataraha kusoo fool leh, waxaanu u babac-dhigaa weeraryahannada iyo laacibiinta khadka dhexe ee kooxaha kasoo horjeeda, gaar ahaan weerarrada degdega ah oo uu noqdo badbaadiyaha lagu halleeyo.
Dhinaca kale, Ander Herrera ayaa noqday hoggaamiyaha rasmiga ah, waxaanu isfaham ka dhex abuuraa guud ahaan kooxda, gaar ahaan isaga iyo Matic, kaddibna waxa uu kooxda ka caawiyaa inay si wanaagsan kubadda u wareejiyo. Ruug-caddaagan u dhashay waddanka Spain, waxa uu khatar ku yahay kubbadaha ay kooxdiisu geyso afka hore, waxaana uu si degdeg ah ku tagaa goolka kooxda kasoo horjeedda sidii uu sameeyey ciyaartii FA Cup ee Chelsea oo kale. Marka kubaddu lugta u gasho kooxda kasoo horjeedda, si degdeg ah ayuu Herrera ugu soo laabtaa booskiisa, waxaana uu muujiyaa tamar aan dhamaad lahayn illaa garsooruhu afuufayo siidhiga dhamaadka.
Jurgen Klopp wuxuu u baahan yahay inuu xaqiijiyo farsamadii ay kooxdiisu ku wiiqi lahayd isfahamka iyo waxqabadka cajiibka ah ee labadan ciyaartoy. Siyaabaha uu ku burburin karo waxa ka mid ah baas degdeg ah iyo weeraryahannada oo ka shaqeeya difaaca dabadooda.
Qorshahan waxa uu Jurgen Klopp kaga dayan karaa Thomas Tuchel oo ciyaartii PSG dejisay xakame xidhxidhay Matic, kaas oo sidoo kalena wiiqay Herrera.